Archive du 19/04/2012
Hifampitady amin-dRazanamahasoa Christine anio
Tsy olan�ny ankolafy Zafy ny fanesorana ny minisitry ny tontolo iainana sy ny ala satria tsy nanolotra olona amin�io toerana io ny ankolafy Zafy Albert fa raharahan�ny Dr Randriamiandrisoa Joseph tamin�ny praiminisitra Beriziky ary i Andry Rajoelina, filohan�ny FAT izany, hoy i Lalatiana Ravololomanana.	Hamaky ny tohiny...	Politique
�Tonga ny fotoana !�
�Avy aiza ny raopilanina boatin-tsaridinina ? Aiza sy ahoana ny momba ireo helikoptera efatra novidian�ny FAT ?�.
Mitohy ny krizy raha Rajoelina no mbola filohan�ny tetezamita
Nanaraka ny toromarika amin�ny tokony hijanonanay Parlemantera eto Antananarivo amin�izao fotoana mavaivay eto amin�ny firenena izao izahay avy any Atsimo Andrefana, hoy ny CST Remara Louis sy ny CT Sazalahy Tsianihy.
Mila manambatra hery, hoy i Dr Didi
Tena misafotofoto be ny raharaham-pirenena amin�izao fotoana izao, hoy i Dr Didi mpitolon�ny ara-dal�na, fa manjaka ny ady toerana ao anatin�ny fikambanana sy antoko politika samihafa misy eto amintsika ary tafiditra ao anatin�izany, indrisy, ny eo anivon�ny ankolafy Marc Ravalomanana.
Hetsiky ny Magro
Potika ny firenena, ny mpitondra anefa toa manentsi-tadiny. Ho an�ny mpikambana eo anivon�ny Kongresy, avy any Manakara, dia tsy hisy mihitsy izany mpamatsy vola sy fankatovana iraisam-pirenena izany raha tsy tafaverian eto Ravalomanana.
Randriatahiana Jacque Pierre
Mitaky ny hanesorana ny lehiben�ny Faritra Amoron�i Mania
Tsy mbola mivaha ny olan�ny mpanao asa tanana ao amin�ny Faritra Amoron�i Mania. Efa nisy vahaolana nomen�ny Ministera saingy misy ny sakantsakana ataon�ny sokajin�olona sasany ao Ambositra. Nitondra ny heviny ka nitafa tamin�ny Tia Tanindrazana, Randriatahiana Jacque Pierre na i Mamonjy.
Tsy Aritra Samy manao izay tiany
Manamafy ny ankolafy Ratsiraka tamin�ny alalan�ny Profesora Ange Andrianarisoa, araka ny resaka nifanaovana taminy fa tena misavoritaka ambony ambany ny eto amin�ny firenena, ary mikorontana ny fitantanana ny tetezamita satria tsy mitovy hevitra sy fomba fijery ny samy mpitondra.
Miarahaba anao ry Jean. Elaela indray isika tsy nifanoratra.
Tsy manafatra fanafody intsony ny fanjakana
Aretin�ny lehilahy samirery ny �homophilie� na koa tsy fivainganan�ny ra izay miseho amin�ny alalan�ny fijininihany foana rehefa misy maratra sy ny fivontosana amin�ny faritry ny vatana voadona.
�Aoka tsy hototofana lainga ny marina�, hoy i Tsiavaliky Celestin
Malaza tao anatin�ny roa volana izao ny tan�nan�i Bezaha, Distrikan�i Betioky Atsimo noho ilay fandorana trano miisa 162 sy fanimbana tsangambato nataon�ny zandary ary ny fahavakisan�ny efitrano fitazonana ireo olona voarohirohy tao amin�ny biraon�ny zandary tao an-toerana ny faran�ny herinandro teo.
Manomboka mampiahiahy ihany ny hahavitana fifidianana amin�ity taona ity raha dinihana ny zava-misy eo amin�ny lafiny politika sy teknika.